Bedelka iCloud Xiriirada in ay Android
Iyadoo bedesheen ka iPhone in telefoonada Android, sidee ayaad u wareejin xog muhiim ah sida xiriirada si phone cusub? Haddii xiriirada waa muhiim, oo aadan rabin in gacanta hal galaan xiriirada ka mid ah. iPhone sidoo kale ma kuu ogolaaneyso in kala iibsiga sahlan ee xiriir nidaamka Android. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira siyaabo dhawr ah oo loo isticmaali karaa si ay u gudbiyaan xiriirada si aad u Android.
1. wadada weyn: Isticmaalka iCloud iyo Gmail.
2. Easyway: Isticmaalka software xisbiga saddexaad si ay u kala iibsiga.
3. Apps: Isticmaal Android Apps si ay u helaan xiriirada.
Habkan, waxaan ka iCloud gudbin doona xiriirada in Gmail, kaas oo ugu dambeyntii syncs la telefoonka cusub Android. Ka dib waa tallaabooyinka aad u isticmaali karto
1. ku haysataa in aad iCloud account ka icloud.com. Hadda dooro xiriirada oo dhan oo taga si goobaha. Under Settings, waxaad ka heli doontaa doorasho dhoofinta vCard. Save faylka dhoofiyo meel ku habboon oo ku saabsan si aad u computer.
2. Haddaba tag in aad xisaabta Gmail oo taga si Xiriirada menu.
3. In uu furmo suuqa cusub, tag xiriirada dejinta ka guddi bidix. Hadda dooro vCard laga dhoofiyey oo geliyaan. Hadda waxaad haysataa in ay doortaan "Import. Doorashada dejinta dari doono xiriirada in aad xisaabta Google.
Isticmaal ID isla Google si ay u hagaagsan aad xiriir google aad Android. Haddii aad qabto wax u hagaagsan ee si toos ah on, oo dhan ee aad u baahan tahay inaad samayso waa in ay sii qalabka on; telefoonka waxaa kuu samayn doonaa.
Bedelka aad xiriirada iCloud la MobileTrans
Wondershare MobileTrans Waa software weyn u qalab Android aad wareejinta xogta iCloud aad. Waa dhamaystiran software kala iibsiga phone 1-click.
Features ee MobileTrans
Kala beddelashada xiriiro sida ugu fudud
1. Download iyo rakibi MobileTrans ah. Hadda xiriiriyaan Android la your computer via USB iyo furi software ah. Hadda dooro ikhtiyaarka "Soo Celinta From hayaan".
2. Hadda dooro icon iCloud ah. On scree soo socda, waxaad u baahan doontaa inay la soo wareegto in aad iCloud Account ayna u oggolaadaan in software ah in la ogaado in aad iCloud gurmad file.
3. dhanka bidix ee suuqa kala, waxaad arki doontaa liiska faylasha. Double guji gurmad iCloud faylka. Gujisid A muuqan doonaa shaashadda weydiisanaya ogolaansho degsado faylka. Ogolaanshaha gujisid iyo ha download ka bilaabaan.
0 4. Hadda dooro xiriir ka dhexe ee suuqa kala ah - waxaad u baahan tahay riix Copy Start. In dhowr ilbiriqsi, faylasha aad la synced doonaa in Device Android.
Isticmaalka barnaamijyadooda Android si ay u gudbiyaan xiriirada iCloud in Android
Waxaa laga daadiyo yar android kuu ogolaanaya inaad si ay u gudbiyaan xiriirada ka iCloud in phone Android. Apps sida SmoothSync, nidaameed xiriirada iCloud, iyo iCloud xiriir hagaagsan.
Waa mid ka mid ah barnaamijyadooda caanka ah ee lagu iibiyo suuqa iyo waxaad isticmaali kartaa app ah si ay u gudbiyaan xiriirada.
1. Laga soo bilaabo Dejinta tago in lagu daro xisaab. Under in aad ka heli doontaa SmoothSync xiriirada daruur. Hadda gasho xisaabtaada iCloud.
2. Hadda, kaliya ogolaan .Wadashaqayntaas si ay u bilaabaan by badalista nidaamka ku saabsan.
Waxaa jira goob badan oo aad tweak karaa laakiin wax walba waa mid fudud iyo software sameeyaa wax kasta oo aad u.
Nidaameed u iCloud Xiriir
Way fududahay in la hagaagsan iCloud xiriir la habab fudud. Tani waa hab kale oo caan ah oo ka shaqaysa weyn ee qalabka Android. Waa sidan sidii aad u isticmaali kartaa app this si ay u gudbiyaan xiriirada.
1. Fur app nidaameed u iCloud Xiriirada iyo furi icon Cloud iyo gasho ID Apple in aad qabto ka hore. Hadda, garaac Xiriirada.
2. Hadda dooro haddii aad rabto in aad u hagaagsan oo dhan xidhiidhka ka dhexeeya aad telefoon iyo iCloud ama aad rabtid in ay u hagaagsan xiriirada iCloud. Tani waxay ku dari doonaa xiriir si aad Android.
App si toos ah syncs xiriir ah oo aan waxba ka badan ayaa loo baahan yahay ka kooxdiisa.
iCloud Xiriirada nidaameed
iCloud Xiriirada nidaameed waa powerfrul kale wareejinta xiriirrada iCloud in aad app Android. Waa kuwan tallaabooyinku fudud si ay u gudbiyaan xiriirada aad.
1. Sida app kasta oo kale oo kaliya waxaa la furo iyo dar xisaabtaada iCloud.
2. Hadda account uu dhejiyo dejinta dura u hagaagsan. Software si toos ah u hagaagsan doono xiriirada ka iCloud la telefoonka aad Android.
Xiriirada aad la heli karaa oo bilaa saxar ah la isticmaalayo software la mid ah. Waa fudud oo si sahlan tahay inaad la shaqeyso.
Hab kasta oo kasta si ay Android wareejinta xiriirada yihiin wax ku ool ah, laakiin qaar ka mid ah qaataan shaqada yar. Habka hab Free ma u baahan tahay dadaal yar marka loo eego labada kale hababka. The software cid saddexaad ku siinayaa awood badan ku data aad rabto in aad u hagaagsan. Ilaa hadda sida ku howlan iCloud xiriirada si Android waa ay ka walwalsan, barnaamijyadooda Android ugu fiican. Waxay kale oo ay ku rakiban qalab laftiisa, oo aad u baahan tahay in ay galaan ID Apple ah. Intaa waxaa dheer, barnaamijyadooda siin fursad kale si xaalkaa xiriiro. Haddii aad raadinayso hab fudud oo degdeg ah, u isticmaalaan barnaamijyadooda Android.
> Resource > iCloud > 3 Siyaabaha Bedelka iCloud Xiriirada in ay Android